Celebrities Archives - ShwengweGames
ကိုရီးယား Chanel ဘုရငျမကတော့ ပွနျပျေါလာခဲ့ပါပွီ
January 27, 2022 by Shwengwe Games
BLACKPINK Jennie ကတော့ ဘာလို့သူ(မ)ဟာ “လူသား Chanel” ဖွဈနရေသလဲဆိုတာကို အသိပေးကွှားဝါခဲ့ပွနျပါတယျ။ ကိုရီးယား Chanel ဘုရငျမကတော့ ပွနျပျေါလာခဲ့ပါပွီ။
BLACKPINK ရဲ့ Jennie ကိုတော့ သူ(မ)ပှဲထှကျလာကတညျးက “The Human Chanel” လို့ပရိသတျတှကေ ချေါဆိုခဲ့ကွပွီး အကွောငျးကတော့ သူ(မ)ဟာ Chanel ဝတျစုံတှေ၊ အသုံးအဆောငျတှနေဲ့ အမွဲဆိုသလိုဓာတျပုံရိုကျလရှေိ့တာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ သူ(မ)ရဲ့ပုံရိပျနဲ့ ဒီဇိုငျးတှဟော လိုကျဖကျညီလှနျးတာကွောငျ့ French luxury house ကတောငျ သတိထားမိသှားပွီး သူ(မ)ကို Chanel brand ambassador ခနျ့အပျထားခဲ့တာပါ။
အဲ့အခြိနျကစလို့ ဒီ Brand အပျေါထားရှိတဲ့ Jennie ရဲ့ခဈြမွတျနိုးမှုဟာဆိုရငျ မိုးထိမွငျ့တကျသှားခဲ့ရပါတော့တယျ။ မကွာသေးခငျကလညျး BLACKPINK အဖှဲ့ဝငျဖွဈသူဟာ Instagram မှာ ဒီဝတျစုံတှနေဲ့ ဓာတျပုံရိုကျတငျထားခဲ့ပွီး “လူသား Chanel” ဆိုတဲ့နာမညျသမုတျခံရခွငျးဟာ မှနျကနျကွောငျးသကျသပွေခဲ့ပွနျပါတယျ။
သူ(မ)ဟာဆိုရငျ အမညျးရောငျပွောကျကွားဝတျစံလေးကို ဝတျဆငျထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ခပျမိုကျမိုကျခြိနျးကွိုးဒီဇိုငျးမြိုးလညျး အကြီမှာပါဝငျပါတယျ။ ဒီလိုအကတျအတိုဝတျစုံရဲ့အောကျမှာတော့ အကြီအဖွူရောငျလကျရှညျကို ဝတျဆငျထားပွီး လမျးသှားလမျးလာဝတျဆငျမှုပုံစံမြိုး ဖနျတီးထားတာပါ။ ဒီလိုပုံစံနဲ့ကိုကျအောငျ ဆံပငျကိုလညျးအနညျးငယျ ဖှထားတော့ လုံးဝကိုအကိုကျဖွဈသှားပါတော့တယျ။
ဒီလိုပုံစံလေးလိုကျဝတျခငျြလိုကျတာ ဆိုသူမြားအတှကျတော့ ရှညျရှညျဝေးဝေးရှာဖှနေစေရာ မလိုပါဘူး။ ဒီအမညျးပွောကျကွားဝတျစုံလေးဟာဆိုရငျ Chanel ရဲ့ 2021/22 အသငျ့ဝတျ ဝတျစုံမြားစုစညျးမှုထဲ ပါဝငျထားခဲ့တာဖွဈပွီး စြေးနှုနျးအားဖွငျ့တော့ အမရေိကနျဒျေါလာ ၄,၉၅၀ ကသြငျ့မှာပါ။
ကိုရီးယားရဲ့ “လူသား Chanel” အတှကျတော့ အကောငျးဆုံးနဲ့ထိုကျတနျလို့ ဝမျးသာပေးမိပါတယျ။
BLACKPINK Jennie ကတော့ ဘာလို့သူ(မ)ဟာ “လူသား Chanel” ဖြစ်နေရသလဲဆိုတာကို အသိပေးကြွားဝါခဲ့ပြန်ပါတယ်။ကိုရီးယား Chanel ဘုရင်မကတော့ ပြန်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။
BLACKPINK ရဲ့ Jennie ကိုတော့ သူ(မ)ပွဲထွက်လာကတည်းက “The Human Chanel” လို့ပရိသတ်တွေက ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပြီး အကြောင်းကတော့ သူ(မ)ဟာ Chanel ဝတ်စုံတွေ၊ အသုံးအဆောင်တွေနဲ့ အမြဲဆိုသလိုဓာတ်ပုံရိုက်လေ့ရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ(မ)ရဲ့ပုံရိပ်နဲ့ ဒီဇိုင်းတွေဟာ လိုက်ဖက်ညီလွန်းတာကြောင့် French luxury house ကတောင် သတိထားမိသွားပြီး သူ(မ)ကို Chanel brand ambassador ခန့်အပ်ထားခဲ့တာပါ။
အဲ့အချိန်ကစလို့ ဒီ Brand အပေါ်ထားရှိတဲ့ Jennie ရဲ့ချစ်မြတ်နိုးမှုဟာဆိုရင် မိုးထိမြင့်တက်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ မကြာသေးခင်ကလည်း BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူဟာ Instagram မှာ ဒီဝတ်စုံတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်တင်ထားခဲ့ပြီး “လူသား Chanel” ဆိုတဲ့နာမည်သမုတ်ခံရခြင်းဟာ မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြန်ပါတယ်။
သူ(မ)ဟာဆိုရင် အမည်းရောင်ပြောက်ကြားဝတ်စံလေးကို ဝတ်ဆင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ခပ်မိုက်မိုက်ချိန်းကြိုးဒီဇိုင်းမျိုးလည်း အကျီမှာပါဝင်ပါတယ်။ ဒီလိုအကတ်အတိုဝတ်စုံရဲ့အောက်မှာတော့ အကျီအဖြူရောင်လက်ရှည်ကို ဝတ်ဆင်ထားပြီး လမ်းသွားလမ်းလာဝတ်ဆင်မှုပုံစံမျိုး ဖန်တီးထားတာပါ။ ဒီလိုပုံစံနဲ့ကိုက်အောင် ဆံပင်ကိုလည်းအနည်းငယ် ဖွထားတော့ လုံးဝကိုအကိုက်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။
ဒီလိုပုံစံလေးလိုက်ဝတ်ချင်လိုက်တာ ဆိုသူများအတွက်တော့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေးရှာဖွေနေစရာ မလိုပါဘူး။ ဒီအမည်းပြောက်ကြားဝတ်စုံလေးဟာဆိုရင် Chanel ရဲ့ 2021/22 အသင့်ဝတ် ဝတ်စုံများစုစည်းမှုထဲ ပါဝင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းအားဖြင့်တော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄,၉၅၀ ကျသင့်မှာပါ။
ကိုရီးယားရဲ့ “လူသား Chanel” အတွက်တော့ အကောင်းဆုံးနဲ့ထိုက်တန်လို့ ဝမ်းသာပေးမိပါတယ်။
ကှယျလှနျသှားခဲ့ပွီးခြိနျမှ ဆုခြီးမွှငျ့ခဲ့ရတဲ့ ကမ်ဘကြျော ဆယျလီ မြား
နာမညျကြျောတဈဦးကှယျလှနျသှားရငျတော့ စိတျမကောငျးစရာသာဖွဈပါတယျ။ အသကျငယျငယျနဲ့ သဆေုံးသှားရတဲ့ အနုပညာရှငျတှဆေိုရငျ ပိုလို့တောငျဝမျးနညျးကွကှေဲစရာပါပဲ။သူတို့သာရှငျသနျနိုငျသေးရငျ ဆကျလကျဖနျတီးမယျ့ အနုပညာတှကေို တှေးကွညျ့ရငျးနှမွောတသဖွဈရစမွဲပါ။
ဒါပမေယျ့ သူတို့ရှငျသနျစဉျမှာ ဖနျတီးခဲ့တဲ့ အနုပညာတှကေို အမွတျတနိုး၊ တနျဖိုးထားရငျးတော့ သူတို့ကိုလှမျးဆှတျ၊ ခြီးကြူးလို့ရနဆေဲပါပဲ။ဒီလိုမြိုး ခြီးကြူးဂုဏျပွုတဲ့အနနေဲ့ ကှယျလှနျသှာခဲ့ပွီးမှ ဆုအခြီးမွှငျ့ခံလိုကျရတဲ့ အနုပညာရှငျတှအေကွောငျး ဒီပို့ဈမှာ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
Heath Ledger တဈယောကျ ၂၀၀၈ ခုနှဈမှာ သဆေုံးသှားခဲ့ပွီဆိုတဲ့သတငျးကွောငျ့ တဈကမ်ဘာလုံးအံ့ဩဝမျးနညျးခဲ့ရပါတယျ။သူ့ကို The Dark Knight မှာ Joker အဖွဈသရုပျဆောငျမှုကွောငျ့ ကှယျလှနျသှားသညျ့တိုငျ ၂၀၀၈ ခုနှဈ အကောငျးဆုံးဇာတျပို့ဆု Oscar ကိုရရှိခဲ့ပါတယျ။ဒီဆုကိုတော့ သူ့မိဘတှနေဲ့ သူ့ညီမလေးတို့က လကျခံရယူခဲ့ကွပါတယျ။
အဲ့အခြိနျတုနျးက ငယျရှယျလှတဲ့ သူ့သမီးလေး Matilda အတှကျလညျး သတိတရထားပွီးဒီဆုကို ခြီးမွှငျ့ခဲ့ကွခွငျးဖွဈပါတယျ။ အဓိကကတော့ ဒီဆုဟာ သရုပျဆောငျမငျးသားကိုယျတိုငျရဲ့ အနုပညာမွောကျ ပီပွငျစှာအားထုတျ၊ သရုပျဆောငျမှုကွောငျ့ ထိုကျထိုကျတနျတနျရရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Peter Finch ဟာ ၁၉၇၇ ခုနှဈ၊ သူ့အသကျ (၆၀) ပွညျ့နှဈမှာ နှလုံးရောဂါကွောငျ့ သဆေုံးသှားခဲ့ရသူပါ။သူကှယျလှနျအပွီးမှာတောငျ Academy Award အခြီးမွှငျ့ခံခဲ့ရပါတယျ။Peter က ဒီဇာတျကားထှကျပွီး နှဈလအကွာမှာအခုလို ဆုံးပါးသှားခဲ့ရတာပါ။
သူရရှိခဲ့တဲ့ Oscar နဲ့ အောငျမွငျမှုတှကေို မမွငျသှားရပမေယျ့ သူရဲ့အရညျအခငျြးတှကေို အသိအမှတျပွုသူတှအေတှကျကတော့ သူဟာအမှတျရစရာတဈဦး ဖွဈနပေါတော့တယျ။
Joan Rivers သဆေုံးမှုကို ကွညျ့ရှုမိရငျတောငျ ဆေးကုသမှုလမျးစဉျတှကွေောငျ့ အခကျအခဲတှရေ့ငျး သဆေုံးသှားခဲ့ရခွငျးဖွဈပါတယျ။ Joan ဟာဆိုရငျ ဖြျောဖွသေူကောငျးတဈဦးဖွဈလို့ အမြိုးသားအမြားစု ကွီးစိုးကွတဲ့ ဟာသ၊ ထလေုံ့းလောကမှာ ကြျောကွားနိုငျသူဖွဈတာပါ။
သူ(မ)ကှယျလှနျသှားပွီးနောကျ ထိမိတဲ့စကားလုံးတှကေို အသုံးပွုနိုငျမှုကွောငျ့ Grammy Award ရရှိခဲ့ပွီး သူ(မ)အရညျအခငျြးတှကေို အသိအမှတျပွုခံခဲ့ရပါတယျ။
Amy Winehouse ဟာ ဂီတလောကမှာ အောငျမွငျမှုခဏသာရရှိခဲ့ပွီး အသကျ (၂၇) နှဈမှာပဲ အရကျဘေးသငျ့ပွီး ကှယျလှနျခဲ့ရသူဖွဈပါတယျ။ကှယျလှနျအပွီးမှာ သူ(မ)ဟာ Tony Bennett နဲ့တှဲဖကျသီဆိုထားတဲ့ “Body and Soul” သီခငျြးနဲ့ Grammy Award အတှကျစံကားတငျပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ Amy နဲ့ Tony တို့ကဆုကိုအနိုငျရရှိခဲ့သလို Tony က Amy ရဲ့မိဘတှကေို ပရိသတျရှထှေ့ကျပွီး သူ(မ)အတှကျ ဂုဏျပွုခှငျ့ပေးခဲ့ပါတယျ။
Chadwick Boseman တဈယောကျဆုံးပါးသှားခဲ့တုနျးကလညျး ကမ်ဘာကွီးတဈခုလုံး အံ့အားသငျ့ပွီး ဝမျးနညျးခဲ့ရပါတယျ။ Chadwick ဟာ အူမကွီးရောဂါကွောငျ့ ကှယျလှနျခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။ သူဟာဆိုရငျ ကြျောကွားတဲ့ဇာတျကားတခြို့မှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျခှငျ့ရှိခဲ့သူပါ။
Chadwick ကှယျလှနျခဲ့ပွီးနောကျမှာလညျး (၂၇) ကွိမျမွောကျ Screen Actors Guild Awards ဆုကို Ma Rainey’s Black Bottom ဇာတျကားနဲ့ ရရှိခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့ခဈြဇနီးဖွဈသူက ဒီဆုကိုရယူပွီး သူ့ကိုခြီးကြူးဂုဏျပွုခဲ့ပါသေးတယျ။ သူ့ရုပျရှငျတှပွေနျကွညျ့မိတိုငျး သူ့အရညျအခငျြးကိုတော့ ပရိသတျတှကေ ဂုဏျပွုရငျးလှမျးဆှတျမိကွမှာ အမှနျပါပဲ။
ရရှေညျမှာတော့ Audrey Hepburn ဟာ အားကောငျးလှတဲ့အသကျမှေးမှုကို ပွုခဲ့သူလို့ဆိုရပါမယျ။ သူ(မ)ဟာ သူ(မ)ကှယျလှနျသှားပွီးတဲ့နောကျမှာတောငျ အမှတျရနရေတဲ့ ဇာတျကားကောငျးတှကေို ရိုကျကူးခဲ့သူပါ။ ၁၉၉၃ ခုနှဈ အသကျ (၆၃) နှဈမှာတော့ သူ(မ)ဟာ အစာအိမျဆကျစပျရောဂါနဲ့ ကှယျလှနျသှားခဲ့ရသူပါ။ သူကှယျလှနျအပွီးမှာ ၁၉၉၃ စီးရီးတဈခုနဲ့ပဲ Emmy ဆုကိုထိုကျထိုကျတနျတနျ အနိုငျယူခဲ့သူဖွဈပါတယျ။
Walt Disney ကတော့ ကမ်ဘာပျေါမှာ အကြျောကွားဆုံးသူတဈဦးဖွဈမှာပါ။ သူက Walt Disney Studios ကို တညျထောငျသူဖွဈပါတယျ။ သူဟာအသကျ (၅၉) နှဈအရှယျမှာ Oscar စံကားတငျအမြားဆုံး ရရှိထားသူလညျးဖွဈခဲ့ပါတယျ။
သူကှယျလှနျသှားအပွီးမှာလညျး Winnie the Pooh နဲ့ Blustery Day တို့အတှကျ Best Short Subject (Cartoon) အဖွဈ အမညျပေးအပျခွငျးခံခဲ့ရသူပါ။ ဒါဟာ သူမသဆေုံးခငျမှာ လုပျကိုငျခဲ့တဲ့နောကျဆုံးဖနျတီးမှုတှဖွေဈပါတယျ။
နာမည်ကျော်တစ်ဦးကွယ်လွန်သွားရင်တော့ စိတ်မကောင်းစရာသာဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ သေဆုံးသွားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေဆိုရင် ပိုလို့တောင်ဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာပါပဲ။ သူတို့သာရှင်သန်နိုင်သေးရင် ဆက်လက်ဖန်တီးမယ့် အနုပညာတွေကို တွေးကြည့်ရင်းနှမြောတသဖြစ်ရစမြဲပါ။
ဒါပေမယ့် သူတို့ရှင်သန်စဉ်မှာ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ အနုပညာတွေကို အမြတ်တနိုး၊ တန်ဖိုးထားရင်းတော့ သူတို့ကိုလွမ်းဆွတ်၊ ချီးကျူးလို့ရနေဆဲပါပဲ။ ဒီလိုမျိုး ချီးကျူးဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ကွယ်လွန်သွာခဲ့ပြီးမှ ဆုအချီးမြှင့်ခံလိုက်ရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေအကြောင်း ဒီပို့စ်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Heath Ledger တစ်ယောက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ သေဆုံးသွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးအံ့ဩဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ကို The Dark Knight မှာ Joker အဖြစ်သရုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ကွယ်လွန်သွားသည့်တိုင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် အကောင်းဆုံးဇာတ်ပို့ဆု Oscar ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆုကိုတော့ သူ့မိဘတွေနဲ့ သူ့ညီမလေးတို့က လက်ခံရယူခဲ့ကြပါတယ်။
အဲ့အချိန်တုန်းက ငယ်ရွယ်လှတဲ့ သူ့သမီးလေး Matilda အတွက်လည်း သတိတရထားပြီးဒီဆုကို ချီးမြှင့်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ဒီဆုဟာ သရုပ်ဆောင်မင်းသားကိုယ်တိုင်ရဲ့ အနုပညာမြောက် ပီပြင်စွာအားထုတ်၊ သရုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Peter Finch ဟာ ၁၉၇၇ ခုနှစ်၊ သူ့အသက် (၆၀) ပြည့်နှစ်မှာ နှလုံးရောဂါကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့ရသူပါ။ သူကွယ်လွန်အပြီးမှာတောင် Academy Award အချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။ Peter က ဒီဇာတ်ကားထွက်ပြီး နှစ်လအကြာမှာအခုလို ဆုံးပါးသွားခဲ့ရတာပါ။
သူရရှိခဲ့တဲ့ Oscar နဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို မမြင်သွားရပေမယ့် သူရဲ့အရည်အချင်းတွေကို အသိအမှတ်ပြုသူတွေအတွက်ကတော့ သူဟာအမှတ်ရစရာတစ်ဦး ဖြစ်နေပါတော့တယ်။
Joan Rivers သေဆုံးမှုကို ကြည့်ရှုမိရင်တောင် ဆေးကုသမှုလမ်းစဉ်တွေကြောင့် အခက်အခဲတွေ့ရင်း သေဆုံးသွားခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Joan ဟာဆိုရင် ဖျော်ဖြေသူကောင်းတစ်ဦးဖြစ်လို့ အမျိုးသားအများစု ကြီးစိုးကြတဲ့ ဟာသ၊ ထေ့လုံးလောကမှာ ကျော်ကြားနိုင်သူဖြစ်တာပါ။
သူ(မ)ကွယ်လွန်သွားပြီးနောက် ထိမိတဲ့စကားလုံးတွေကို အသုံးပြုနိုင်မှုကြောင့် Grammy Award ရရှိခဲ့ပြီး သူ(မ)အရည်အချင်းတွေကို အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရပါတယ်။
Amy Winehouse ဟာ ဂီတလောကမှာ အောင်မြင်မှုခဏသာရရှိခဲ့ပြီး အသက် (၂၇) နှစ်မှာပဲ အရက်ဘေးသင့်ပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ ကွယ်လွန်အပြီးမှာ သူ(မ)ဟာ Tony Bennett နဲ့တွဲဖက်သီဆိုထားတဲ့ “Body and Soul” သီချင်းနဲ့ Grammy Award အတွက်စံကားတင်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Amy နဲ့ Tony တို့ကဆုကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သလို Tony က Amy ရဲ့မိဘတွေကို ပရိသတ်ရှေ့ထွက်ပြီး သူ(မ)အတွက် ဂုဏ်ပြုခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
Chadwick Boseman တစ်ယောက်ဆုံးပါးသွားခဲ့တုန်းကလည်း ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး အံ့အားသင့်ပြီး ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ Chadwick ဟာ အူမကြီးရောဂါကြောင့် ကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာဆိုရင် ကျော်ကြားတဲ့ဇာတ်ကားတချို့မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိခဲ့သူပါ။
Chadwick ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးနောက်မှာလည်း (၂၇) ကြိမ်မြောက် Screen Actors Guild Awards ဆုကို Ma Rainey’s Black Bottom ဇာတ်ကားနဲ့ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ချစ်ဇနီးဖြစ်သူက ဒီဆုကိုရယူပြီး သူ့ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပါသေးတယ်။ သူ့ရုပ်ရှင်တွေပြန်ကြည့်မိတိုင်း သူ့အရည်အချင်းကိုတော့ ပရိသတ်တွေက ဂုဏ်ပြုရင်းလွမ်းဆွတ်မိကြမှာ အမှန်ပါပဲ။
ရေရှည်မှာတော့ Audrey Hepburn ဟာ အားကောင်းလှတဲ့အသက်မွေးမှုကို ပြုခဲ့သူလို့ဆိုရပါမယ်။ သူ(မ)ဟာ သူ(မ)ကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတောင် အမှတ်ရနေရတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတွေကို ရိုက်ကူးခဲ့သူပါ။ ၁၉၉၃ ခုနှစ် အသက် (၆၃) နှစ်မှာတော့ သူ(မ)ဟာ အစာအိမ်ဆက်စပ်ရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရသူပါ။ သူကွယ်လွန်အပြီးမှာ ၁၉၉၃ စီးရီးတစ်ခုနဲ့ပဲ Emmy ဆုကိုထိုက်ထိုက်တန်တန် အနိုင်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
Walt Disney ကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကျော်ကြားဆုံးသူတစ်ဦးဖြစ်မှာပါ။ သူက Walt Disney Studios ကို တည်ထောင်သူဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာအသက် (၅၉) နှစ်အရွယ်မှာ Oscar စံကားတင်အများဆုံး ရရှိထားသူလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သူကွယ်လွန်သွားအပြီးမှာလည်း Winnie the Pooh နဲ့ Blustery Day တို့အတွက် Best Short Subject (Cartoon) အဖြစ် အမည်ပေးအပ်ခြင်းခံခဲ့ရသူပါ။ ဒါဟာ သူမသေဆုံးခင်မှာ လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးဖန်တီးမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။
သီလရှငျဝတျမှ ထှကျခဲ့ပွီး နောကျပိုငျး သူမရဲ့ ပုံရိပျလေးကို မြှဝပေေးလာခဲ့တဲ့ မသေကျထားဆှေ
January 26, 2022 by Shwengwe Games
ငယျစဉျကတညျးက အနုပညာဝါသနာပါပွီး ကလေးသီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲကတဆငျ့လူသိမြားလာခဲ့တဲ့ အဆိုတျောမလေး မသေကျထားဆှကေကွညျလငျပွတျသားတဲ့ဘအသံလေးနဲ့သီခငျြးကောငျးလေးတှကေိုသီဆိုတတျသူလေးပဲဖွဈပါတယျ။ အခုဆိုရငျမသေကျထားဆှကေသူမကို အားပေးတဲ့ပရိသတျတှနေဲ့လူကွိုကျမြား ထငျရှားတဲ့အဆိုတျောလေးဖွဈလို့နပေါပွီ။
မွနျမာသံအဆိုရှငျလေးပီပီ မွနျမာဆနျဆနျ ဆံပငျရှညျလေးနဲ့ ကကျြသရရှေိတဲ့ပုံရိပျလေးတဈခုကိုပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မသေကျထားဆှဟောပွီးခဲ့တဲ့လတှမှောတော့သူမမွတျနိုးရတဲ့ဆံပငျတှကေိုစှနျ့ လှတျပွီးသီလရှငျဝတျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီကနမှေ့ာတော့ မသေကျထားဆှကေ သီလရှငျထှကျခဲ့ပွီးသူမရဲ့ကတုံးဆံပငျပေါကျနဲ့ပုံလေးကိုပွသလာခဲ့တာကို အခုလိုမြိုးပဲခဈြစဖှယျတှရေ့ပါတယျ။မသေကျထားဆှကေတော့ ဆံပငျရှညျလေးနဲ့လညျးမွနျမာဆနျဆနျ ကကျြသရရှေိသလို အခုလိုဆံပငျတိုလေးနဲ့လညျး အရမျးကိုခဈြစရာကောငျးလှပါတယျ။ပရိသတျကွီးကတော့မသေကျထားဆှကေို ဘယျလိုပုံလေးနဲ့ဖွဈဖွဈ ခဈြပွီးသားဖွဈမှာပါနျော။
Source: Maythethtar Swe’s fb
Credit ;Myanmar Celebrities
ငယ်စဉ်ကတည်းက အနုပညာဝါသနာပါပြီး ကလေးသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကတဆင့် လူသိများလာခဲ့တဲ့ အဆိုတော်မလေး မေသက်ထားဆွေက ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ဘအသံလေးနဲ့သီချင်းကောင်းလေးတွေကိုသီဆိုတတ်သူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အ ခုဆိုရင်မေသက်ထားဆွေကသူမကို အား ပေးတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့လူကြိုက်များ ထင် ရှားတဲ့အဆိုတော်လေးဖြစ်လို့နေပါပြီ။
မြန်မာသံအဆိုရှင်လေးပီပီ မြန်မာဆန်ဆန် ဆံပင်ရှည်လေးနဲ့ ကျက်သရေရှိတဲ့ပုံရိပ်လေးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မေသက်ထားဆွေဟာပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာတော့သူမမြတ်နိုးရတဲ့ဆံပင်တွေကိုစွန့် လွှတ်ပြီးသီလရှင်ဝတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ မေသက်ထားဆွေက သီလရှင်ထွက်ခဲ့ပြီးသူမရဲ့ကတုံးဆံပင်ပေါက်နဲ့ပုံလေးကိုပြသလာခဲ့တာကို အခုလိုမျိုးပဲချစ်စဖွယ်တွေ့ရပါတယ်။မေသက်ထားဆွေကတော့ ဆံပင်ရှည်လေးနဲ့လည်းမြန်မာဆန်ဆန် ကျက်သရေရှိသလို အခုလိုဆံပင်တိုလေးနဲ့လည်း အရမ်းကိုချစ်စရာကောင်းလှပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးကတော့မေသက်ထားဆွေကို ဘယ် လိုပုံလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ချစ်ပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်။
မှေးနမှေ့ာ ဆုတောငျးပေးကွသူတှေ အားလုံးကို ကြေးဇူးတငျစကားလေး ဆိုလာတဲ့ အောငျလေး
မျောဒယျ၊သရုပျဆောငျ မငျးသားခြော အောငျလေးကတော့ ဆယျကြျောသကျအရှယျ ပြိုပြိုမလေေးတှကွေားမှာ သညျးသညျးလှုပျ ရပေနျးစားအောငျမွငျနတေဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦး ဖွဈပါတယျ။ ခဏလေးအတှငျးမှာ လူသိမြားအောငျ မွငျလာတဲ့ အောငျလေးက အခုဆိုရငျ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှနေဲ့ သီခငျြးဗီဒီယိုတှေ ဆကျတိုကျရိုကျကူးနရေတာ ဖွဈပါတယျ။
အောငျလေးကတော့ အနုပညာလှုပျရှားမှုပုံရိပျမြားကို သူရဲ့ဖဘှေ့တျစာမကျြနှာပျေါတှငျ ဖျောပွလရှေိ့တာလညျးတှရေ့ပါတယျ။လကျရှိမှာတော့ အနုပညာအလုပျတှကေိုကွိုးစားလုပျကိုငျရငျး ပရိသတျတှမြှေျောလငျ့ထားတဲ့အတိုငျးသရုပျ ဆောငျကောငျးတဈယောကျဖွဈအောငျလညျး ကွိုးစားနသေူတဈဦးဖွဈပါတယျ။
အခုမှာတော့ သူရဲ့မှေးလေးနလေ့ေးမှာ ဆုတောငျးပေးကွသူတှေ အားလုံးကို အမှတျတရ ကြေးဇူးတငျစကားလေး ဆိုလာပါတယျ ။ ”ဒီနမှေ့ာကရြောကျတဲ့ ကြှနျတျော ရဲ့အသကျ 30ပွညျ့နှဈမှေးနလေ့ေးမှာ bd wish လုပျပေးကွတဲ့ သူငယျခငျြးမိတျဆှမြေားအားလုံး ပရိတျသတျမြားအားလုံးကိုရငျထဲကနတေကယျကိုလှိုကျလှိုကျလဲလဲကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျခငျဗြာ
တဈယောကျစီတိုငျးရဲ့ ဆုတောငျးစကားတဈခုဆီတိုငျး ကိုကြှနျတျောရငျထဲမှာတကယျကိုလေးစားတနျဖိုးထားပွီးအမှတျတရနဲ့ဝမျးသာပီတိ ဖွဈရပါတယျအဲတာကွောငျ့တဈဦးတဈယောကျခငျြးဆီကို စာကိုအလေးထားပွီးပွနျခငျြပမေယျ့ စာကွောငျးမြားစှာဖွဈတာကွောငျ့ မပွနျနိုငျခဲ့တာ နားလညျခှငျ့လှတျပေးပါခငျဗြာ
ကြှနျတေျာ့ကိုမှေးနမှေ့စပွီးနှဈပေါငျးမြားစှာတိုငျအောငျ စိတျခမျြးသာကိုယျကမျြးမာနဲ့ ဖွဈခငျြတာတှဖွေဈရပါစဆေိုပွီးဆုတောငျးပေးကွတဲ့သူငယျခငျြးမိတျဆှညေီကိုမောငျနှအားလုံးကြှနျတေျာ့ Fan လေးတှအေားလုံးကိုလညျးပွနျဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျခငျဗြာ
အားလုံးပဲ စိတျ ၏ခမျြးသာခွငျးကိုယျ၏ ကမျြးမာခွငျးနဲ့ ပွညျ့ဆုံပွီးအရာရာအားလုံးကိုအကောငျးဆုံးဖွတျကြျောပွီး အောငျမွငျနိုငျကွပါစခေငျဗြာ”ဆိုပွီးရေးသားဖျောပွထားရာ ပရိသတျကွီး အတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ ။
Photo – Aung Lay
မော်ဒယ်၊သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော အောင်လေးကတော့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ပျိုပျိုမေလေးတွေကြားမှာ သည်းသည်းလှုပ် ရေပန်းစားအောင်မြင်နေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ခဏလေးအတွင်းမှာလူသိများအောင် မြင်လာတဲ့ အောင်လေးက အခုဆိုရင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေနဲ့ သီချင်းဗီဒီယိုတွေ ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်လေးကတော့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်များကို သူရဲ့ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဖော်ပြလေ့ရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရင်း ပရိသတ်တွေမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းသရုပ် ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လည်း ကြိုးစားနေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
အခုမှာတော့ သူရဲ့မွေးလေးနေ့လေးမှာ ဆုတောင်းပေးကြသူတွေ အားလုံးကို အမှတ်တရ ကျေးဇူးတင်စကားလေး ဆိုလာပါတယ် ။ ” ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ ကျွန်တော် ရဲ့အသက် 30ပြည့်နှစ်မွေးနေ့လေးမှာ bd wish လုပ်ပေးကြတဲ့ သူ ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံး ပရိတ်သတ်များအားလုံးကိုရင်ထဲကနေတကယ်ကိုလှိုက်လှိုက်လဲလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
တစ်ယောက်စီတိုင်းရဲ့ ဆုတောင်းစကားတစ်ခုဆီတိုင်း ကိုကျွန်တော်ရင်ထဲမှာ တကယ်ကိုလေးစားတန်ဖိုးထားပြီးအမှတ်တရနဲ့ဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်ရပါတယ်.. အဲတာကြောင့်တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းဆီကို စာကိုအလေးထားပြီးပြန်ချင်ပေမယ့် စာကြောင်းများစွာဖြစ်တာကြောင့် မပြန်နိုင်ခဲ့တာ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါခင်ဗျာ
ကျွန်တော့်ကိုမွေးနေ့မှစပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျမ်းမာနဲ့ ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ရပါစေဆိုပြီးဆုတောင်းပေးကြတဲ့သူငယ်ချင်းမိတ် ဆွေ ညီကိုမောင်နှအားလုံးကျွန်တော့် Fan လေးတွေအားလုံးကိုလည်းပြန်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
အားလုံးပဲ စိတ် ၏ချမ်းသာခြင်းကိုယ်၏ ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်ဆုံပြီးအရာရာအားလုံးကိုအကောင်းဆုံးဖြတ်ကျော်ပြီး အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ”ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြထားရာပရိသတ်ကြီး အတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
ခွမေသနျစှမျးသူမြားအား လိုရာသှားနိုငျအောငျ ခွတေုမြားလှူဒါနျးပွီး မဖျောပွနိုငျတဲ့ ပီတိလေးတှေ ဖွဈနတေယျဆိုတဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ
ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျော မငျးသမီးခြောလေး ခိုငျနှငျးဝကေတော့ လကျရှိမှာ လူထုအကြိုးပွုအလုပျတှကေို ကိုယျတိုငျကိုယျကလြုပျကိုငျနပွေီး ပရိသတျတှကေတောငျ “ပရဟိတ မငျးသမီး”လို ချေါဆိုတာကိုတောငျခံနရေတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျပါ။
လူမမယျ မိဘမဲ့ ကလေးသူငယျတှကေိုလညျး “ခိုငျနှငျးဝေ ရငျသှေးလေးမြားဂဟော”ဆိုပွီး ဂဟောလေး ဖှငျ့လှဈကားသားသမီးအရငျးတှသေဖှယျကိုယျတိုငျပွုစုရှောကျထားမှုတှလေညျးပေးအပျထားပါသေးတယျ။
အနုပညာရှငျလုပျဖျောကိုငျဖကျတှထေဲက ကွပျတညျးတဲ့ သူတှကေိုလညျး လိုအပျတဲ့ အကူအညီတှပေေးအပျလရှေိ့ပါသေးတယျ။မွနျမာနိုငျငံအနှံအပွားက ဒသေတှကေို ကိုယျတိုငျသှားရောကျကာ လိုအပျတဲ့ အကူအညီတှကေိုလညျး ပေးအပျတဲ့ သူတဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ခွထေောကျမသနျစှမျးသူတှကေိုလညျး လိုရာခရိးကို ခြောမောစှာသှားနိုငျရနျအတှကျ ခွတေုမြားလှူဒါနျးပေးပွီး ကုသိုလျပွုနပေါသေးတယျ။ဒီနမှေ့ာလညျး
“ဖျောပွလိုမရတဲ့ပီတိလေးတှေ နဲ့ လှူဒါနျးရသောကုသိုလျအကြိုးတရားတိုကို ခုနှဈရကျ သားသမီးမြား အားလုံး အားလုံး ထပျတူ ထပျမြှ ရရှိကွပါစရှေငျ..”🙏🙏🙏ဆိုပွီးခွတေုမြားလှူဒါနျးပွီး မဖျောပွနိုငျတဲ့ခံစားခကျြတှေ ခံစားနရေကွောငျးကိုသူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျမှာရေးသားထားတာလေးကို တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော။
အခကျခဲဖွဈနတေဲ့ပွညျသူမြားအတှကျ အမွဲတစလှေူဒါနျးပေးနတေဲ့ ခိုငျနှငျးဝကေတော့လေးစားစရာပါပဲနျော။ခိုငျနှငျးဝေ ရဲ့ အလှူလေးကိုလညျး မှတျခကျြပေးခဲ့ကွပါဦး ပရိတျသတျကွီးရေ
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် မင်းသမီးချောလေး ခိုင်နှင်းဝေကတော့ လက်ရှိမှာ လူထုအကျိုးပြုအလုပ်တွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလုပ်ကိုင်နေပြီး ပရိသတ်တွေကတောင် “ပရဟိတ မင်းသမီး”လို ခေါ်ဆိုတာကိုတောင်ခံနေရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။
လူမမယ် မိဘမဲ့ ကလေးသူငယ်တွေကိုလည်း “ခိုင်နှင်းဝေ ရင်သွေးလေးများဂေဟာ”ဆိုပြီး ဂေဟာလေး ဖွင့်လှစ်ကားသားသမီးအရင်းတွေသဖွယ်ကိုယ်တိုင်ပြုစုရှောက်ထားမှုတွေလည်းပေးအပ်ထားပါသေးတယ်။
အနုပညာရှင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေထဲက ကြပ်တည်းတဲ့ သူတွေကိုလည်း လိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေပေးအပ်လေ့ရှိပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနှံအပြားက ဒေသတွေကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကာ လိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေကိုလည်း ပေးအပ်တဲ့ သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ခြေထောက်မသန်စွမ်းသူတွေကိုလည်း လိုရာခရိးကို ချောမောစွာသွားနိုင်ရန်အတွက် ခြေတုများလှူဒါန်းပေးပြီး ကုသိုလ်ပြုနေပါငေးတယ်။ဒီနေ့မှာလည်
“ဖော်ပြလို မရတဲ့ ပီတိလေးတွေ နဲ့ လှူဒါန်းရသော ကုသိုလ်အကျိုးတရားတိုကို ခုနှစ်ရက် သားသမီးများ အားလုံး အားလုံး ထပ်တူ ထပ်မျှ ရရှိကြပါစေရှင်..”🙏🙏🙏ဆိုပြီး ခြေတုများလှူဒါန်းပြီး မဖော်ပြနိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေ ခံစားနေရကြောင်းကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်မှာရေးသားထားတာလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူများအတွက် အမြဲတစေလှူဒါန်းပေးနေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေကတော့လေးစားစရာပါပဲနော်။ခိုင်နှင်းဝေ ရဲ့ အလှူလေးကိုလည်း မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါဦး ပရိတ်သတ်ကြိးရေ
အသကျ (၅၀) နားနီးလာပမေယျ့ နုပြိုလှတဲ့ အလှတရားတှကေို ပိုငျဆိုငျထားမွဲဖွဈတဲ့ ခိုငျသငျးကွညျ
ပရိသတျကွီးရေ ခိုငျသငျးကွညျ ကတော့ အနုပညာလောကထဲကိုတော့ ဒါရိုကျတာ စငျရျောမောငျမောငျ ရိုကျကူးတဲ့ မိုးယံသို့လှငျ့ပြံစမေယျ့ ကသေရာဇာတို့၏အားမာနျ ဇာတျကားနဲ့ အနုပညာလောကကို စတငျဝငျရောကျခဲ့ပွီးတော့ရုပျရှငျနဲ့ဗီဒီယိုကားပေါငျးမြားစှာကိုရိုကျကူးခဲ့ပွီး အောငျမွငျမှုပေါငျးမြားစှာကို ဆှတျခူးခဲ့သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။သူမဟာ (၂၀၀၂) ခုနှဈမှာကိုခနျ့နိုငျနှငျ့လကျထပျခဲ့ပွီး
ယခုဆို စံထိပျထားဦးဆိုတဲ့ သမီးလေးတဈယောကျကိုလညျးပိုငျဆိုငျထားပါတယျ။ခိုငျသငျးကွညျကတော့ဆယျစုနှဈ တဈစုကြျော ယနအေ့ခြိနျအထိ ပရိသတျအားမှု အခိုငျအမာ ရရှိနဆေဲဖွဈပါတယျ။ဆှဲဆောငျမှုရှိပွီးလှပကြော့ရှငျးတဲ့ အလှတရားတှနေဲ့ ရုပျရှငျနယျပယျမှာယနအေ့ခြိနျအထိ အောငျမွငျမှုတှကေိုထိနျးထားဆဲဖွဈပါတယျ။ဒီနမှေ့ာတော့ခိုငျသငျးကွညျ ကတော့ သူမရဲ့ဖဘှေ့တျမှာ ဓာတျပုံလေးတဈပုံကို ပရိသတျအလှမျးပွေ တငျပေးထားပါတယျ။
ထပျဆငျ့အကယျဒမီ မငျးသမီးခြော ခိုငျသငျးကွညျကတော့အနုပညာလမျး ကွောငျးမှာ အောငျမွငျမှုမြားစှာ ရရှိထားရုံသာမကဘဲကွညျနူးစရာကောငျးတဲ့မိသားစုဘဝကို ပိုငျဆိုငျထားသူတဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။သူမဟာ အလုပျတှမေအားလပျပမေယျ့လညျးသမီးဖွဈသူကို လိမ်မာရေးခွားရှိအောငျ အမွဲသှနျသငျဆုံးမတတျတဲ့ မိခငျကောငျးတဈဦးဖွဈတယျလို့လညျးသိရပါတယျ။ရုပျရှငျဇာတျကားတှေ
ရိုကျကူးသရုပျဆောငျရာမှာလညျး သရုပျဆောငျပီပွငျလှနျးတဲ့အတှကျအကယျဒမီပေါငျးမြားစှာရရှိထားပါတယျ။ရုပျရှငျလောကထဲမှာအခြိနျအတျောကွာ ရပျတညျပွီးတဲ့နောကျ ၂၀၁၃ ခုနှဈမှာတော့စုနျးပွူးဆိုတဲ့ရုပျရှငျဇာတျကားနဲ့အကောငျးဆုံး အမြိုးသမီးဇာတျပို့ဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒီနောကျ ၂၀၁၄ ခုနှဈမှာတော့ ကောငျးကြိုးကိုယျ၌တညျစမေငျးဆိုတဲ့ ဇာတျကားနဲ့ အကောငျးဆုံးအမြိုးသမီးဇာတျဆောငျဆုကိုထိုကျထိုကျတနျတနျ ရရှိခဲ့ပါတယျ။သူမပါဝငျခဲ့တဲ့ ဒီဇာတျကားဟာဆိုရငျတဈကားထဲမှာပဲ အကယျဒမီလေးခုအထိရရှိခဲ့တဲ့ဇာတျကားပဲ ဖွဈပါတယျ။
ယနတေို့ငျနုပြိုနတေဲ့ ခိုငျသငျးကွညျ ရဲ့ဓာတျပုံလေးကို သူမကိုခဈြတဲ့ပရိသတျကွီးအတှကျအလှမျးပွဝေမြှေပေးလိုကျပါတယျနျော။ဖတျရှု့ပေးတဲ့စာဖတျပရိသတျကွီးကိုကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျ။
Credit Cele Only
ပရိသတ်ကြီးရေ ခိုင်သင်းကြည် ကတော့ အနုပညာလောကထဲကိုတော့ ဒါရိုက်တာ စင်ရော်မောင်မောင် ရိုက်ကူးတဲ့ မိုးယံသို့လွင့်ပျံစေမယ့် ကေသရာဇာတို့၏အားမာန် ဇာတ်ကားနဲ့ အနုပညာလောကကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုကားပေါင်းများစွာကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုပေါင်းများစွာကို ဆွတ်ခူးခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ (၂၀၀၂) ခုနှစ်မှာကိုခန့်နိုင်နှင့်လက်ထပ်ခဲ့ပြီး
ယခုဆို စံထိပ်ထားဦးဆိုတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ခိုင်သင်းကြည်ကတော့ဆယ်စုနှစ် တစ်စုကျော် ယနေ့အချိန်အထိပရိသတ်အားမှုအခိုင်အမာ ရရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးလှပကျော့ရှင်းတဲ့အလှတရားတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်နယ်ပယ်မှာယနေ့အချိန်အထိ အောင်မြင်မှုတွေကိုထိန်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ခိုင်သင်းကြည် ကတော့ သူမရဲ့ဖေ့ဘွတ်မှာ ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကို ပရိသတ်အလွမ်းပြေ တင်ပေးထားပါတယ်။
ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ မင်းသမီးချော ခိုင်သင်းကြည်ကတော့အနုပညာလမ်း ကြောင်းမှာ အောင်မြင်မှုများစွာရရှိထားရုံသာမကဘဲကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအလုပ်တွေမအားလပ်ပေမယ့်လည်းသမီးဖြစ်သူကို လိမ္မာရေးခြားရှိအောင် အမြဲသွန်သင်ဆုံးမတတ်တဲ့မိခင်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ
ရိုက်ကူးသရုပ်ဆောင်ရာမှာလည်း သရုပ်ဆောင်ပီပြင်လွန်းတဲ့အတွက် အကယ် ဒမီပေါင်းများစွာရရှိထားပါတယ်။ရုပ်ရှင်လောကထဲမှာအချိန်အတော်ကြာရပ် တည်ပြီးတဲ့နောက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာတော့စုန်းပြူးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့အ ကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာတော့ ကောင်းကျိုးကိုယ်၌တည်စေမင်းဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားနဲ့ အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆုကိုထိုက် ထိုက်တန်တန် ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူမပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီဇာတ်ကားဟာဆိုရင်တစ်ကားထဲမှာပဲ အကယ်ဒမီလေးခုအထိရရှိခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့တိုင်နုပျိုနေတဲ့ခိုင်သင်းကြည် ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကို သူမကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်အလွမ်းပြေဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ဖတ်ရှု့ပေးတဲ့စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
ကနျြးမာရေးမကောငျးတဲ့ ယောကျြားကို ကနျစှနျးရှကျလေးတှခေူးရောငျးပွီး ရှာဖှကြှေေးမှေးနရေတဲ့ အဖှားတဈဦး အားတဈသိနျးကပျြ ထောကျပံ့ပေးခဲ့တဲ့ မိုးစကျ
လူရှငျတျောမိုးစကျကတော့လတျတလော နိုငျငံရေးအခွအေနနေဲ့ ကိုဗဈရောဂါကူးစကျမှုဖွဈပျေါနတေဲ့ အခြိနျကာလတှမှောအကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ စားဝတျနရေေးအတှကျအခကျအခဲဖွဈနတေဲ့ မိသားစုတှကေို တဈဖကျတဈလမျးကနေ ကူညီလှူဒါနျးမှုတှလေုပျပေးပွီး မှနျမွတျတဲ့ ပရဟိတအလုပျတှကေို လုပျကိုငျပေးနတောဖွဈပါတယျ။
သူ့ရဲ့အလှူလေးတှမှော အနယျနယျအရပျရပျကနေ စတေနာရှငျမြားရဲ့ လှူဒါနျးမှုတှနေဲ့ အတူလှူဒါနျးထောကျပံ့ပေးနတော ဖွဈပါတယျ။အနုပညာရှငျတှသောမကအဆငျမပွတေဲ့အိမျထောငျစုတှကေိုတှရေ့ငျလညျးအမွဲတမျးတတျစှမျးသလောကျကူညီခဲ့တဲ့စတေနာကောငျးသူတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။
မိုးစကျက ကိုယျတိုငျလညျး ရရှိတဲ့ အနုပညာကွေးလေးတှစေုပေါငျးပွီးလှူဒါနျးသလိုအမြားစုပေါငျးအလှူတှမှောလညျး လုပျအားဒါနတှကေူညီလရှေိ့ပါတယျ။ဒါ့ကွောငျ့လညျးပရိသတျတှအေားလုံးက မိုးစကျကို လေးစားခဈြခငျနကွေတာပါ။ဒါတငျမကဘဲ သူရဲ့အလှူလေးတှကေိုလညျး အားလုံးမွငျတှပွေီ့းပီတိဖွဈရအောငျလညျးရေးသားဖျောပွလရှေိ့ပါတယျ။ဒီနမှေ့ာတော့ ကနျြးမာရေးမကောငျးတဲ့ ယောကျြားကို ကနျစှနျးရှကျလေးတှခေူးရောငျးပွီး ရှာဖှကြှေေးမှေးနရေ အဖှားတဈဦး အားထောကျပံ့ခဲ့တဲ့အကွောငျးကို
“မွစောလေး ၊ကညှနျ့ ၊ ကနျစှနျးရှကျလေးတှခေူးပွီးကနျြးမာရေးမကောငျးတဲ့ အဖှားယောကျြားကိုရှာဖှကြှေေးမှေးနရေတာပေါ့ကှယျ”“အဖှားရောငျးတာရော ကွာပွီလား…”“ကွာလှပါပွီ သားရယျ”“အဖှားက ဘယျအခြိနျတှခေူးပွီးရောငျးတာလဲ??”
“မနကျဆို ခူးပွီး ညနရေောငျးတာတဈနေ့ ၂၅၀၀ လောကျတော့ ရောငျးရတယျ”“သားအဖှားရဲ့ ကနျစှနျးရှကျလေးတှေ အကုနျဝယျရငျဘယျလောကျလဲ အဖှား..”“သားအဆငျပွသေလိုကွညျ့ပေးပါ..”“ဟုတျကဲ့ အဖှားဒါဖှားဖှားကို ကနျတော့တာပါ..”
“ကြေးဇူးတငျပါတယျ သားရယျ ပိုကျဆံတှကေ အမြားကွီးဘဲနျော.”“ဟုတျကဲ့ တဈသိနျးကပျြပါ အဖှားသမာအာဇီဝကကြ လုပျကိုငျစားပွီးလငျယောင်ျကြားအပျေါ တာဝနျကတြေဲ့အဖှားအတှကျဂုဏျပွုပေးတာပါ ”ပြျောလိုကျတာသားရယျ…”
ကြှနျတျောပွနျသှားတော့အဖှားအခကျအခဲကို လာပွောပွတဲ့အဈကိုကဖုနျးဆကျပါတယျ..။အဖှား အပြျောတှလှေနျပွီးခြှေးတှပွေနျ ၊ ရငျတှပေနျးတှတေောငျတုနျနရှောတယျတဲ့ ။ဪ အဲ့လောကျတောငျ ဝမျးသာသှားရှာတာလား အဖှားရယျ။အဖှားရှိတဲ့ နရောလေးက
အရှဒေ့ဂုံမွို့နယျ ၊ အအေးခနျးမှတျတိုငျအနီး(ရှာသာကွီး) မှာ ညနဘေကျဆို လှညျ့လညျရောငျးခပြါတယျ။အခုလို သကျကွီးဖိုးဖှားမြားကိုလှူဒါနျးခငျြတိုငျး လှူဒါနျးခှငျ့ရအောငျကြှနျတျောနဲ့အတူ ပါဝငျလှူဒါနျးကွသူမြားအားလုံးကြေးဇူးတငျလကျြပါခငျဗြာ။ 🙏🙏🙏ဆိုပွီးရေးသားလာပါတယျ။
ရောကျလရောအရပျတိုငျးမှာ အခကျခဲဖွဈသူတှကေို စတေနာအပွညျ့နဲ့ အမွဲကူညီပေးနတေဲ့ မိုစကျရဲ့ လှုဒါနျးမှုလေးကိုလညျးမှတျခကျြပေးခဲ့ပေးပါဦးနျော။
လူရွှင်တော်မိုးစက်ကတော့လတ်တလော နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အချိန်ကာလတွေမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စားဝတ်နေရေးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ မိသားစုတွေကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ကူညီလှူဒါန်းမှုတွေလုပ်ပေးပြီး မွန်မြတ်တဲ့ ပရဟိတအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့အလှူလေးတွေမှာ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ကနေ စေတနာရှင်များရဲ့ လှူဒါန်းမှုတွေနဲ့ အတူလှူဒါန်းထောက်ပံ့ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာရှင်တွေသာမကအဆင်မပြေတဲ့အိမ်ထောင်စုတွေကိုတွေ့ရင်လည်းအမြဲတမ်းတတ်စွမ်းသလောက်ကူညီခဲ့တဲ့စေတနာကောင်းသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
မိုးစက်က ကိုယ်တိုင်လည်း ရရှိတဲ့ အနုပညာကြေးလေးတွေစုပေါင်းပြီးလှူဒါန်းသလိုအများစုပေါင်းအလှူတွေမှာလည်း လုပ်အားဒါနတွေကူညီလေ့ရှိပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်လည်းပရိသတ်တွေအားလုံးက မိုးစက်ကို လေးစားချစ်ခင်နေကြတာပါ။ဒါတင်မကဘဲ သူရဲ့အလှူလေးတွေကိုလည်း အားလုံးမြင်တွေ့ပြီးပီတိဖြစ်ရအောင်လည်းရေးသားဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ ယောက်ျားကို ကန်စွန်းရွက်လေးတွေခူးရောင်းပြီး ရှာဖွေကျွေးမွေးနေရ အဖွားတစ်ဦး အားထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို
“မြေစာလေး ၊ကညွန့် ၊ ကန်စွန်းရွက်လေးတွေခူးပြီးကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ အဖွားယောက်ျားကိုရှာဖွေကျွေးမွေးနေရတာပေါ့ကွယ်”“အဖွားရောင်းတာရော ကြာပြီလား…”“ကြာလှပါပြီ သားရယ်”“အဖွားက ဘယ်အချိန်တွေခူးပြီးရောင်းတာလဲ??”
“မနက်ဆို ခူးပြီး ညနေရောင်းတာတစ်နေ့ ၂၅၀၀ လောက်တော့ ရောင်းရတယ်”“သားအဖွားရဲ့ ကန်စွန်းရွက်လေးတွေ အကုန်ဝယ်ရင်ဘယ်လောက်လဲ အဖွား..”“သားအဆင်ပြေသလိုကြည့်ပေးပါ..”“ဟုတ်ကဲ့ အဖွားဒါဖွားဖွားကို ကန်တော့တာပါ..”
“ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သားရယ် ပိုက်ဆံတွေက အများကြီးဘဲနော်.”“ဟုတ်ကဲ့ တစ်သိန်းကျပ်ပါ အဖွားသမာအာဇီဝကျကျ လုပ်ကိုင်စားပြီးလင်ယောင်္ကျားအပေါ် တာဝန်ကျေတဲ့အဖွားအတွက်ဂုဏ်ပြုပေးတာပါ ”ပျော်လိုက်တာသားရယ်…”
ကျွန်တော်ပြန်သွားတော့အဖွားအခက်အခဲကို လာပြောပြတဲ့အစ်ကိုကဖုန်းဆက်ပါတယ်..။အဖွား အပျော်တွေလွန်ပြီးချွေးတွေပြန် ၊ ရင်တွေပန်းတွေတောင်တုန်နေရှာတယ်တဲ့ ။ဪ အဲ့လောက်တောင် ဝမ်းသာသွားရှာတာလား အဖွားရယ်။အဖွားရှိတဲ့ နေရာလေးက
အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် ၊ အအေးခန်းမှတ်တိုင်အနီး(ရွာသာကြီး) မှာ ညနေဘက်ဆို လှည့်လည်ရောင်းချပါတယ်။အခုလို သက်ကြီးဖိုးဖွားများကိုလှူဒါန်းချင်တိုင်း လှူဒါန်းခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်နဲ့အတူ ပါဝင်လှူဒါန်းကြသူများအားလုံးကျေးဇူးတင်လျက်ပါခင်ဗျာ။ 🙏🙏🙏ဆိုပြီးရေးသားလာပါတယ်။
ရောက်လေရာအရပ်တိုင်းမှာ အခက်ခဲဖြစ်သူတွေကို စေတနာအပြည့်နဲ့ အမြဲကူညီပေးနေတဲ့ မိုစက်ရဲ့ လှုဒါန်းမှုလေးကိုလည်းမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပေးပါဦးနော်။
အထာကလြှနျးတဲ့ ဖကျရှငျလေးနဲ့ သူမရဲ့ ကဈြလဈတောငျ့တငျးပွီး အခြိုးအစားကလြှနျးတဲ့ ခန်ဓာကိုယျအလှတှကေို အထငျးသား ပျေါလှငျနတေဲ့ သငျဇာဝငျ့ကြျော ရဲ့ ပုံရိပျမြား
သငျဇာဝငျ့ကြျောကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောငျမွငျမှုတှအေခိုငျအမာနဲ့ အနုပညာလမျးကွောငျးမှာ လြှောကျလှမျးရပျတညျနပွေီး အခြိုးအစားကတြဲ့ ညို့အားပွငျးကောကျကွောငျးအလှတှကွေောငျ့ ပုရိသပရိသတျတှကွေား ရပေနျးစားနသေူကလညျးဖွဈပါတယျ ။
ခပျဟော့ဟော့နဲ့ သူမြားနဲ့မတူတဲ့ဖကျရှငျတှကေို ဝတျဆငျကာ အမြိုးသားပရိသတျတှရေငျထဲမှာ နရောအပွညျ့ယူထားသူပါ။အမိုကျစား sexy ဖကျရှငျတှနေဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ ကဈြလဈြလှပတဲ့ခန်ဓာကိုယျကိုလညျး ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျလညျးဖွဈပါတယျ။
သူမရဲ့ လှပတဲ့ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားတှပေျေါလှငျအောငျ ဝတျစားကာ တငျထားတဲ့ ဗဈကနီပုံရိပျတှကေိုလညျး အမြိုးသားပရိသတျတှေ မြားစှာအားပေးသဘောကလြကျြရှိပါတယျ။
ပုရိသတှရေဲ့ အားပေးဝနျးရံမှုတှကေိုလညျး အမြားဆုံးရရှိထားတဲ့ သငျဇာလေးကတော့ ကဈြလဈသှယျလကြာ ဆှဲဆောငျမှုတှရှေိလှနျးတဲ့ ပငျကိုယျအလှတရားတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့အပွငျ သူမတူတဲ့ ညို့အားပွငျးဖကျရှငျပုံရိပျလေးတှနေဲ့ ဖမျးစားတတျသူလေးပါ ။
ဇာတျကားတှမြေားစှာ ရိုကျကူးထားပွီး ကွျောငွာတှအေပွငျ အခမျးအနားပှဲတှတေျောတျောမြားမြားလညျး တကျရောကျနတေဲ့ သငျဇာကတော့ Sexy ကလြှနျးတဲ့ အလနျးစားပုံရိပျလေးတှနေဲ့ မွငျသူပရိသတျတှကေို ဖမျးစားတတျပါသေးတယျ ။
သူမရဲ့ လှုပျရှားမှု ပုံလေးတှကေိုလညျး အမွဲလိုလို ဖျောပွလရှေိ့တာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ ။အခုလညျး အထာကလြှနျးတဲ့ ဖကျရှငျလေးနဲ့ သူမရဲ့ ကဈြလဈတောငျ့တငျးပွီး အခြိုးအစားကလြှနျးတဲ့ ခန်ဓာကိုယျအလှတှကေို အထငျးသား ပျေါလှငျနတေဲ့ ပုံရိပျတှကေို ဝမြှေလာပါတယျ ။
ပုံတိုငျးက ဆှဲဆောငျမှုရှိလှပွီး အခါခါပွနျကွညျ့ခငျြရလောကျအောငျ လနျးလှနျးတာကွောငျ့ ပွနျလညျဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ ။
Credit – Yaungchi
သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေအခိုင်အမာနဲ့ အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ လျှောက်လှမ်းရပ်တည်နေပြီး အချိုးအစားကျတဲ့ ညို့အားပြင်းကောက်ကြောင်းအလှတွေကြောင့် ပုရိသပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားနေသူကလည်းဖြစ်ပါတယ် ။
ခပ်ဟော့ဟော့နဲ့ သူများနဲ့မတူတဲ့ဖက်ရှင်တွေကို ဝတ်ဆင်ကာ အမျိုးသားပရိသတ်တွေရင်ထဲမှာ နေရာအပြည့်ယူထားသူပါ။အမိုက်စား sexy ဖက်ရှင်တွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ကျစ်လျစ်လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားတွေပေါ်လွင်အောင် ဝတ်စားကာ တင်ထားတဲ့ ဗစ်ကနီပုံရိပ်တွေကိုလည်း အမျိုးသားပရိသတ်တွေ များစွာအားပေးသဘောကျလျက်ရှိပါတယ်။
ပုရိသတွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုတွေကိုလည်း အများဆုံးရရှိထားတဲ့ သင်ဇာလေးကတော့ ကျစ်လစ်သွယ်လျကာ ဆွဲဆောင်မှုတွေရှိလွန်းတဲ့ ပင်ကိုယ်အလှတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင် သူမတူတဲ့ ညို့အားပြင်းဖက်ရှင်ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ဖမ်းစားတတ်သူလေးပါ ။
ဇာတ်ကားတွေများစွာ ရိုက်ကူးထားပြီး ကြော်ငြာတွေအပြင် အခမ်းအနားပွဲတွေတော်တော်များများလည်း တက်ရောက်နေတဲ့ သင်ဇာကတော့ Sexy ကျလွန်းတဲ့ အလန်းစားပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ မြင်သူပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစားတတ်ပါသေးတယ် ။
သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှု ပုံလေးတွေကိုလည်း အမြဲလိုလို ဖော်ပြလေ့ရှိတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ် ။အခုလည်း အထာကျလွန်းတဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ သူမရဲ့ ကျစ်လစ်တောင့်တင်းပြီး အချိုးအစားကျလွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှတွေကို အထင်းသား ပေါ်လွင်နေတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ဝေမျှလာပါတယ် ။
ပုံတိုင်းက ဆွဲဆောင်မှုရှိလှပြီး အခါခါပြန်ကြည့်ချင်ရလောက်အောင် လန်းလွန်းတာကြောင့် ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ။
သူမဈေးရောငျးလို့ရတဲ့ငှမြေား စုပေါငျးပွီး ခိုငျနှငျးဝေ ပရဟိတ အသငျးထံ အလှူငှမြေားစှာ လှူဒါနျးခဲ့တဲ့ နှေးနှေးခဈြဖှယျ
မွို့တျောခဈြဖှယျရဲ့တဈဦးတညျးသော သမီးဖွဈသလို အဆိုတျော တဈဦးဖွဈတဲ့ နှေးနှေးခဈြဖှယျကို ပရိသတျတှလေညျး သိကွမှာပါ။ နှေးကတေ့ာ အသံပါဝါ အားကောငျးကောငျးနဲ့ တေးသီခငျြးတှကေို သီဆိုပွီး ဂီတလောကမှာ အောငျမွငျမှုတှရေရှိအောငျ ကွိုးစားလြှောကျလှမျးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
သူမရဲ့ သီခငျြဟောငျးလေးတှကေလညျး ပရိသတျတှကွေားမှာ ယနထေိ့တိုငျအောငျ ကွားနရေဆဲပဲ ဖွဈပါတယျ။ နှေးနှေးက ဘာသာရေးလညျး အလှနျကိုငျးရှိုငျးလှနျးသူတဈယောကျဖွဈပွီး မကွာခဏဆိုသလို ခဈြခငျရတဲ့ မိတျဆှမြေားနဲ့အတူ အဓိဌာနျဝငျရောကျလရှေိ့တာလညျး တှရေ့ပါတယျ။
အခုလညျး (၇) ရကျသားသမီးတှနေဲ့ စုပေါငျးပွီး ခိုငျနှငျးဝေ ပရဟိတ အသငျးကို အလှူငှမြေားစှာ လှူဒါနျးခဲ့ကွောငျးကို ” B&P ကို ဝယျယူသုံးဆှဲကွသော ၇နေ့ ၈နံ ၇ရကျ သားသမီးကာစတနျမာ မြား မှလှူဒါနျးသညျ B&P ကုမ်ပဏီ လှူဒါနျးငှေ ၁၅ သိနျးကပျြ နတျလူသာဓု ချေါစသေျော 🙏🏻 ” ရေးသားဖျောပွထားရာ ပရိသတျကွီး အတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ ။
Photo – Nway Nway Chit Phwal
မြို့တော်ချစ်ဖွယ်ရဲ့တစ်ဦးတည်းသော သမီးဖြစ်သလို အဆိုတော် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နွေးနွေးချစ်ဖွယ်ကို ပရိသတ်တွေလည်း သိကြမှာပါ။ နွေးကတေ့ာ အသံပါဝါ အားကောင်းကောင်းနဲ့ တေးသီချင်းတွေကို သီဆိုပြီး ဂီတလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင် ကြိုးစားလျှောက်လှမ်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ သီချင်ဟောင်းလေးတွေကလည်း ပရိသတ်တွေကြားမှာ ယနေ့ထိတိုင်အောင် ကြားနေရဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နွေးနွေးက ဘာသာရေးလည်း အလွန်ကိုင်းရှိုင်းလွန်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မကြာခဏဆိုသလို ချစ်ခင်ရတဲ့ မိတ်ဆွေများနဲ့အတူ အဓိဌာန်ဝင်ရောက်လေ့ရှိတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
အခုလည်း (၇) ရက်သားသမီးတွေနဲ့ စုပေါင်းပြီး ခိုင်နှင်းဝေ ပရဟိတ အသင်းကို အလှူငွေများစွာ လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းကို ” B&P ကို ဝယ်ယူသုံးဆွဲကြသော ၇နေ့ ၈နံ ၇ရက် သားသမီးကာစတန်မာ များ မှလှူဒါန်းသည် B&P ကုမ္ပဏီ လှူဒါန်းငွေ ၁၅ သိန်းကျပ် နတ်လူသာဓု ခေါ်စေသော် 🙏🏻 ” ရေးသားဖော်ပြထားရာ ပရိသတ်ကြီး အတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
သူရဲ့အသကျ၂၇နှဈပွညျ့မှေးနလေ့ေးမှာ ဆုတောငျးပေးကွတဲ့သူမြားကိုကြေးဇူးတငျကွောငျးပွောလာတဲ့ ထကျအောငျရှိုငျး
ထကျအောငျရှိုငျးကတော့ တောငျ့တငျးကဈြလဈတဲ့ Body နဲ့ ရုပျရညျစတိုငျ အနအေထားတှကွေောငျ့ မိနျးမလှလေးတှကွေားမှာ ရပေနျးစားနတေဲ့ ကိုလူခြောလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။
မျောဒယျအဖွဈသာ အနုပညာအလုပျတှကေို စတငျလုပျကိုငျနပေမေယျ့လညျး သူရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုအလနျးလေးတှကွေောငျ့ ပရိသတျအခိုငျအမာရရှိထားသလို လူသိမြားနတေဲ့ Cele တဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။
လကျရှိမှာတော့ အနုပညာအလုပျတှကေို ကွိုးစားလုပျကိုငျရငျး ပရိသတျတှမြှေျောလငျ့ထားတဲ့ အတိုငျးသရုပျဆောငျကောငျးတဈယောကျဖွဈအောငျလညျး ကွိုးစားနသေူတဈဦးဖွဈပါတယျ။
သူရိုကျကူးတဲ့ ဇာတျကားမြားက ဆိုရငျလညျး ဇာတျရုပျအမြိုးမြိုးကို ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျသူဖွဈလို့ ပရိသတျတှကေ အခဈြပိုနရေတာလညျးဖွဈပါတယျ။
အခုမှာတော့ သူရဲ့မှေးနလေ့ေးမှာ သတိတရ ဆုတောငျးပေးကွသူတှေ အားလုံးကို ” မှေးနဆေု့တောငျးပေးကွတဲ့တဈယောကျခငျြးစီတိုငျးကို ကြေးဇူးတငျပါတယျဗြာ..ကနြျောအသကျ၂၇ပွညျ့ပါပီ အသကျတဈနှဈထကျတဈနှဈကွီးလာတာနဲ့အမြှ
ဘဝအတှကျအဓိပ်ပာယျရှိတဲ့အရာတှကေိုပိုမိုကွိုးစားလုပျကိုငျသှားနိုငျဖို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ .. ” ခုလို စာလေးရေးကာ ကြေးဇူးတငျစကားလေး ဆိုလာရာ ပရိသတျကွီး အတှကျ ပွနျလညျဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ ။
ထက်အောင်ရှိုင်းကတော့ တောင့်တင်းကျစ်လစ်တဲ့ Body နဲ့ ရုပ်ရည်စတိုင် အနေအထားတွေကြောင့် မိန်းမလှလေးတွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ ကိုလူချောလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မော်ဒယ်အဖြစ်သာ အနုပညာအလုပ်တွေကို စတင်လုပ်ကိုင်နေပေမယ့်လည်း သူရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုအလန်းလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားသလို လူသိများနေတဲ့ Cele တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရင်း ပရိသတ်တွေမျှော်လင့်ထားတဲ့ အတိုင်းသရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လည်း ကြိုးစားနေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
သူရိုက်ကူးတဲ့ ဇာတ်ကားများက ဆိုရင်လည်း ဇာတ်ရုပ်အမျိုးမျိုးကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေက အချစ်ပိုနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုမှာတော့ သူရဲ့မွေးနေ့လေးမှာ သတိတရ ဆုတောင်းပေးကြသူတွေ အားလုံးကို ” မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးကြတဲ့တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..ကျနော်အသက်၂၇ပြည့်ပါပီ အသက်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ
ဘဝအတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အရာတွေကိုပိုမိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်သွားနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .. ” ခုလို စာလေးရေးကာ ကျေးဇူးတင်စကားလေး ဆိုလာရာ ပရိသတ်ကြီး အတွက် ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ။